Hillary Clinton oo ku dhowaaqday in Maraykanku si rasmi ah u aqoonsaday dowlada Soomaaliya – idalenews.com
Xoghayaha arrimaha dibada dowlada Maraykanka Hillary Clinton ayaa si rasmi ah ugu dhowaaqday in dowlada Maraykanku aqoosaday jiritaanka dowlada federalka Soomaaliya.
Shir jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Hillary Clinton ayaa waxa ay xoghayaha arrimaha dibada Maraykanka ka sheegtay in arrimaha dalka Soomaaliya ay ahaayeen kuwo si gaar ah iyada u tixgelin jirtay.
“Waxaan ku faraxsanahay in toddobaadyda ugu dambeeya ee aan halkan joogo in aan tallaabo taariiqi ah u qaadno in aan aqoonsano dowlada Soomaaliya,” ayay Clinton u sheegtay weriyaashii joogay shirka jaraa’id.
“Diblumaasiyiinteena iyo khubaradeena ayaa booqasho ku tegey dalka Soomaaliya waxana aan rajaynayaa in aan dhowaan wakiilo rasmi ah aan ku yeelan doono Muqdisho,”ayay tiri Clinton.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay shirka jaraa’id ayaa ugaga mahadceliyey dowlada Maraykanka aqoonsiga ay siisay, waxana uu xusay in taageero dhinac walba ah ay dowlada Maraykanka siisay dalka Soomaaliya 22kii sano ee la soo dhaafay. Madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu si gaar ah ugu mahad celiyay Mss Clinton isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in xiriir wanaagsan dhex mari doono xoghayaha cusub ee arrimaha dibada ee dowlada Maraykanka.
Kahor kulanka Clinton ayuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waxa uu lakulmay madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama.
Afartii sano ee la soo dhaafay ayay dowlada Maraykanka waxa ay ku bixisay lacag ka badan hal bilyan oo dollar dalka Soomaaliya iyadoo $650 million oo dollar ay ku baxday taageerada iyo tababarka ciidamada midowga Afrika eek u sugan Soomaaliya. $200 million ayuu Maraykanku ku bixiyay taageerida arrimaha bani’aadanimada ee ka jira Soomaaliya, $130 million waxa uu Maraykanku ku bixiyay sidii loo abuuri lahaa mashaariic dib u dhisaya arrimaha ammaanka.
Dowlada Maraykanka ayaa sidoo kale waxa ay qeyb ku lahayd la dagaalanka ururka Alshabaab iyadoo dayuuradaha aan cidna wadin ee Droneska duqeymo ka geysteen dalka Soomaaliya.
Aqoonsiga rasmiga ah ee dowlada Maraykanka ayaa waxa ay dowlada Soomaaliya fursad u helaysaa in ay xiriir la yeelato hay’ada kaalmada u qaabilsan Maraykanka ee USAID. Sidoo kale dowlada ayaa awood u helaysa in ay kaalmo ka dalbato bangiga adduunka iyo hay’ada IMF.
R/wasaaraha Soomaaliya oo kulan casho sharaf ah la qaatay saraakiisha ciidamada Qalabka sida